ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုကို လူကုန်ကူးတိုက်ဖျက်ရေးမှ ဝင်ရောက်စစ်ဆေး
ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ ညနေလေးနာရီခန့်က ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်အလယ်ရပ်ကွက်ရှိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ
တစ်ခုကို အမှတ် (၆) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စု၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသခံနယ်မြေထိန်းတို့က ဝင်ရောက်
စစ်ဆေး ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ခန်း လေးလွှာတွင်ရှိသည့် အဆိုပါ LTPC ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခန်းအတွင်း ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးသုံးဦးနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့
အိမ်အကူစေလွှတ်ရန် သင်တန်းလေ့ကျင့်ပေးနေသည့် အမျိုးသမီးငယ် ၁၃ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အသက် ၁၆နှစ်အရွယ်
တိုင်းရင်းသူနှစ်ဦးအပါအဝင် အသက်၁၈နှစ် မပြည့်သေးသည့် အမျိုးသမီးငယ် ၃ဦးပါ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၆နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးကို ကုမ္ပဏီက အသက်၂၄နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်လိမ်လည်ထိုးစေခဲ့ကြောင်းယင်းကလေးငယ်နှစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။
ယင်းအနက် ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန်ရန် ပက်စ်ပို့ ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
“သမီးတို့နှစ်ယောက်က ဒီနှစ်ဆယ်တန်းကျလို့ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ ဒီကိုရောက်လာတာပါ၊ သင်တန်းကြေးနဲ့ ကျန်တာတွေအတွက် ပိုက်ဆံမပေးရပါဘူး၊ ဟိုကိုရောက်တော့မှ လုပ်ခလစာထဲက ခြောက်လစာဖြတ်မယ်လို့ ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်”ဟုရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ လယ်စောင်းကျေးရွာမှ ရောက်ရှိနေသည့် ၁၆နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်မှ ပြောပြခဲ့သည်။
၎င်းတို့အပါအဝင် ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေ အင်းလေးဒေသမှ ၉ဦး နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှ ၄ဦး၊ စုစုပေါင်း အမျိုးသမီးငယ်၁၃ဦးသည် ကုမ္ပဏီတိုက်ခန်းသို့ ရောက်ရှိနေသည်မှာ တစ်လခွဲခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည့် အမှတ် (၆) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စုမှ ရဲအုပ်ဝေလွင် က
“ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ အုပ်ထိန်းသူတွေဆီ ပြန်အပ်ပေးပါ့မယ်၊ လက်တလော ဘာပုဒ်မနဲ့ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမရှိသေးပါဘူး၊ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ညောင်ရွှေဘက်က ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ နောက်ပြီး လဝက ရုံးက အချက်အလက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသွားရဦးမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီရှိ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးသုံးဦး၏ ပြောပြချက်အရ ၎င်းတို့သည် ကလေးများ၏ သင်တန်းဆရာမများသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသာ ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဆိုသူသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသည့် ညဆယ်နာရီချိန်အထိ ကုမ္ပဏီသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိပေ။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် တရားဝင်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ လူကုန်ကူးမှု ဥပဒေနှင့် မညှိစွန်းကြောင်း၊ အကယ်၍ ညှိစွန်းခဲ့ပါကလည်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှ တရားလိုပြုလုပ်ကာ တိုင်ကြားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုရဲအုပ် လင်းထွဋ် ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/18/2014 1 အကြံပြုခြင်း
မဟာသန္တိသုခကျောင်း၏ ပိုင်ရှင်အစစ်က ဘယ်သူလဲ ..... ????????
အပ်နှံထားတယ်ဆိုတာ အပြီးအပိုင်ပေးလှူ လိုက်တာ မဟုတ်ခဲ့ပါ ။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် ရေးသားပေးပို့ အကြောင်းကြားထားသည့် လျှောက်ထားချက်မှ စာမျက်နှာ - ၃ - တွင် အောက်ပါကဲ့သို့ အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည် ။ ။
( ဤ မဟာသန္တိသုခစင်တာ ကျောင်းတော်ကြီးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ခြင်း လုံဝမပြုသည့်အပြင် သာသနာတော်အကျိုး ထပ်ဆင့်တိုးပွားစေရန်အတွက် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သံဃာတော် ၅ သိန်းတို့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့သို့ အပ်နှံခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်ဘုရား ။ )
ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများကို ဆရာတော်ဦးဇဝန ခေတ္တ-နယူးယောက်ခ်၏ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကူးယူပါသည် ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/18/20140အကြံပြုခြင်း
ကျောင်းသား ကိုနိုင် ငံရေး နဲ့ မပတ်သက် အောင်ခြိမ်း ခြောက်
မန္တလေးတိုင်း၊ ပလိပ်ချည်ထည် စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ လခ အပြည့်အဝ မရလို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့ ရဲမှူးး
ကျောက်ဖြူတွင် ကုလားများအား ၈၂-ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ခြင်းရာတွင် မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်ခဲ့သည်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် ဟု ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက ယုံကြည်
By Mra Wah
ကျောက်ဖြူ ၊ ၁၈ ဇွန်လ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ဘင်္ဂလီကုလားများအား ၁၉၈၂ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်
မြို့မိမြို့ဖကိုယ်စားလှယ်တချို့ဖြင့် ၁၆-၆-၂၀၁၄(တနင်္လာ) နေ့တွင်
ယင်းကိစ္စအား Coral Arakan News မှ
နောက်ပြီးမလိုလားအပ်သောလူမျိုးရေး ပြဿနာများလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
အကျဉ်းကျလျက်ရှိ) ဆိုရင် ဘင်္ဂလီတော်တော်များများကိုကမန်လူမျိုးအမည်ခံပြီး
ဒီမှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားတွေဟာ တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပါ။
ဘင်္ဂလီတွေ အကုန်လုံးနီးပါးကမန်နာမည်နှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရသွား
နိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းမှဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူဒေသခံလူငယ်တစ်ဦးမှလည်း “ ဥပဒေအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတာကကောင်းပါတယ်
ကျောက်ဖြူမြို့တွင် လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်ခန့်က ဦးမောင်လှ
ဆိုသူဘင်္ဂလီလူမျိုးတဦးမှ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားအတုများ နှင့်
ဖောင်းကြွရုံးတံဆိပ်အတု ဖြင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်
အများအပြားကိုအတုပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ယင်းအမှုဖြင့် ဦးမောင်လှသည်
ထောင်ဒဏ် အနှစ် (၂၀)ခန့် ပြစ်ဒဏ်ကျခဲ့သည်။ ၎င်းပြုလုပ်ပေးခဲ့သော
သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း Coral Arakan News
( Coral Arakan News အတွက် မြ၀ါ ရေးသားသည်။ )
(မောင်တောခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နုတ်ထွက်စာ တင်ရသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ခု)
ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မကြိုက်တဲ့အ တွက် ထွက်စာတင် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက် ပွဲတုန်းက နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကို ကော်မရှင်က ပယ်ချ ခဲ့ပေမယ့် အတင်းထည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကော်မရှင် ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘာမှမှရှိဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအ ချက်တွေကြောင့် ထွက်စာတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်''
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မီဒီယာတွေဆီ ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ဆွေးနွေးနေတဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီ အနေနဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို မပြင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ လွှတ်တော်ကော်မတီ အတွက် နာယကကြီး သူရဦးရွှေမန်း ချမှတ်ပေးထားတဲ့ သံမဏိ စည်းမျဉ်းတွေအရ ကော်မတီတွင်း ဆွေးနွေးတာတွေကို လျို့ဝှက်ထားရမယ် ဆိုတာကြောင့် ဘယ်ကော်မတီဝင် အမတ်ကမှ သူတို့ နာမည်နဲ့ တကွ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မလုပ်ကြလို့ သတင်းကို လုံးဝ မှန်ကန်ပါတယ် ဆိုပြီး အတည်ပြုလို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါတင်မက အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဆီက အမွေဆက်ခံထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဦးဆောင်သူ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ ဆိုတာကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ အသံဗလံတွေ ထွက်လာရင် ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး အပြောင်းအလဲ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ သာဓကကလည်း အများကြီးရှိလေတော့ အဲဒီ သတင်း တစ်ထစ်ချ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည် စိတ်ချရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ အဲဒီ သတင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလား၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ စစ်တပ် ဘာကြောင့် အဲဒီလို လုပ်ရတာလဲ၊ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာ ဒီတစ်ပါတ် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
တကယ်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့အချက်ကို အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေက ချမှတ်သွားခဲ့တာပါ။ အခု ပွင့်လင်းစ ပြုလာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု ရောက်လာတာတောင် အဲဒီ အချက် ပြင်နိုင်ရေး လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ပြည်သူတွေ လက်ထဲမှာ ရှိမနေပါဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ တဆင့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ကို အပိုင်စီးထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ တပ်မတော် လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလို့ ကြွေးကြော်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မယ့် အခွင့်အရေးကိုလည်း အပြည့်အ၀ ရယူထားကြတာပါ။
တကယ်တော့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြမယ့်အစား လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ကော်မတီ၊ အဲဒီ ကော်မတီအတွက် ချထားပေးတဲ့ တစ်ဖက်သတ် ဆန်လွန်းတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကနေ တဆင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ တပ်မတော်ဟာ သူတို့လိုချင်တာကိုပဲ ပုံဖော်ကြမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကို အထူးအထွေ ထပ်ရှင်းပြဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မရအောင် တားဆီးထားတဲ့ ပြဌာန်းချက် ဆိုတာ ပြည်သူတွေကရော နိုင်ငံတကာကပါ နားလည်ကြပါတယ်။ ဒီ ပုဒ်မ ဖျက်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုလာကြတဲ့အခါ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ပုဒ်မ တစ်ခုကို ပြင်မပေး၊ ဖျက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ အာဏာပိုင်တွေက တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့အင်အားစုတွေကတော့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို ပြင်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ညှိုးနွမ်းကုန်တော့မယ့်အလား၊ ဘာသာခြားတွေကပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတ တက်လုပ်တော့မယ့်အလား မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ ၀ါဒ ဖြန့်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါနဲ့ ပါတ်သက်ရင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောတဲ့စကားဟာ မယုတ်မလွန် ရှိသလို လက်ခံလို့လဲ ရနိုင်ပါတယ်။ သူက ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သူ့သဘောထား ရပ်တည်ချက်ကို ပြောဆိုရာမှာ (၁) ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ (၂) ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း ပြည့်မီအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ ပြောပြီး နံပါတ် (၃) အနေနဲ့ “ မည်သည့်နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးကိုမျှ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်အား ကန့်သတ် တားမြစ်ထားခြင်းမျိုး မဖြစ်စေလိုသည့် နိုင်ငံရေး စေတနာ ရှိသလို တစ်ဖက်တွင်လည်း မိမိတို့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံဇ။် အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ကို မထိပါးစေမည့် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အကာအကွယ် ပေးနိုင်သည့် အခြေခံများ ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သလို တစ်ကြိမ်မက ပြောဆိုတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြောလိုက်တာက မေလ ၃၁ ရက်နေ့ ရေဒီယို မိန့်ခွန်းမှာပါ။
တကယ်လို့ သမ္မတ ကသာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အငြင်းပွားမှုကို ပြီးပြတ်စေချင်ရင် ဒီ ထက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆို သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမျိုးသားဖခင်ကြီး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရင်နှစ်သည်းခြာ သမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ သာမန် နိုင်ငံသားထက် ပိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်၊ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်နဲ့ ပါတ်သက်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အထွတ်အထိပ် နေရာ ဖြစ်တာကြောင့် “အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံဇ။် အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ကို မထိပါးစေမည့် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အကာအကွယ် ပေးနိုင်သည့် အခြေခံ” တွေကို ထည့်သွင်းထားမယ်။ စသဖြင့် ပြောဆိုဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိမိကတော့ဖြင့် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူး စသဖြင့် ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောရဲဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီနည်းအတိုင်း သူရဦးရွှေမန်းကလည်း အလားတူ သဘောထားမျိုး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ပေးနိုင်သလား၊ မပေးနိုင်ဘူးလား၊ အဲဒီ သဘောထားကို လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး လွှတ်တော်ကော်မတီ ကို အလုပ်လမ်းညွှန်အဖြစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေကို လျောက်ပြောနေကြတာဟာ ရှည်လျား၊ ထွေပြား၊ ပေများပြီး သတ္တိမရှိ၊ သူရဲဘောကြောင်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအရ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ပေးထားလိုက်ရင်တောင် အလိုအလျောက် သမ္မတ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်သန်းရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမတ် ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒုသမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုသမ္မတ ဖြစ်သည့်တိုင် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ရာ သေခြာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မတော်သား အမတ်တွေ အပါအ၀င် ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ သမ္မတ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ရေး ခရီး မနီးပါဘူး၊ မလွယ်ကူပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်နေမှန်း မသိပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ အရည်အချင်း မပြည့်မီဘူးဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ စောစောစီးစီး ကတုတ်ကျင်းတူးပြီး ကာထားတာဟာ စစ်ရေးအမြင်အရ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးမှာတော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ပထမ အရေးအကြီးဆုံးက ပြည်သူလူထုရဲ့ အမုန်းတရားကို ရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ လူ၊ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အဖြစ် မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာကလည်း ဒီလိုပဲ မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို သွားမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ ရင်နှစ်သည်းခြာ သမီးတစ်ယောက်ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီး ဥပဒေရေးဆွဲ ကန့်သတ်ထားတာဟာ အလွန် မမျှတမှုအဖြစ်၊ ညစ်ပတ်မှု တစ်ခုအဖြစ်၊ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ အပြုအမူအဖြစ် မလွဲမသွေ ရှုမြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံ့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလားအလာ မကောင်းပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးဟာ နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ ရှေ့ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ချီတက်သွားနေချိန် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရွံ့ထဲ ဗွက်ထဲ မိုးထဲ ရေထဲ ခရီးနှင်ကြရပါဦးမယ်။ ဒါတွေဟာ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ဆိုသလို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေရဲ့ အပြုအမူကြောင့် ထွက်လာတဲ့ ရလာဒ်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး တာဝန်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်မီကြောင်း အာမခံချက်ပေးပြီး ကျန် ကြိုက်ရာ ပုဒ်ထီးပုဒ်မတွေကို ကြိုက်သလို ရေးဆွဲ ထည့်သွင်းကြပါလို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြသူများကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- နစ်ကီ)
အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြု သကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဥပဒေကြမ်းကို ဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ အမြန်ဆုံးပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ပြောသည်။
အတည်ပြုလိုက်သော ဥပဒေကြမ်းအရ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုသူများသည် ဥပဒေပါခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများက ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုများကို ယခင်ကဲ့သို့ ငြင်းဆိုပိတ်ပင်ခြင်းများ လုံးဝပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း ပြင်ဆင်ထားသည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအရ ထောင်ဒဏ်များကို မူလက အများဆုံးနှစ်နှစ်မှ အနည်းဆုံးခြောက်လအထိ သတ်မှတ်ထားရာ ယခု အများဆုံး တစ်နှစ်မှ အနည်းဆုံးတစ်လအထိ လျှော့ချပြဋ္ဌာန်းထားသည်။